DP 6.3 जीवनको सुत्र – www.kamalsfabulous.com/ibook
DP 6.3 जीवनको सुत्र
जीवनको सुत्र र फ्mर्मुला
लेखकले आफ्नो जीवनको समस्त अध्ययन र अनुभवकोे निचोडबाट के निष्कर्षमा पुगेको छभने सृष्टिको कतिपयरहस्यसर्वसाधारणलेनबुझ्दापनि उसको जीवन चल्न सक्दछ ।तर उ ज्ञानी जस्तो सुखी र आन्दित हुन सक्दैन । सृष्टिका, व्यवहारिकरुपमा भेटिएका कतिपयकुराहरु लाई गहिरिएरबुझ्छु भन्दा कतिकठिनाइमा डुब्नु परेको थुप्रै उदाहरणहरु भेटियो । त्यसैले यस्तो खतरनाक अबस्थाबाट कसरी बच्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा लेखकको आफ्नो तर्क र विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
१.ज्ञान पाउँन जत्तिसुकै कठिन भएपनि प्राप्त गनुपर्दछ । मानिसको लागि सृष्टिको रहस्य, आफ्नो र आफ्mन्तको सही रचना र परिचय, मृत्युको परिभाषा, मृत्यु पछाडिको जीवन जस्ता सम्बेदनशिल विषयमा ज्ञान हुनु मानिसको लागि भाग्य हो ।
२. तर मानिसले ती ज्ञानको सदुपयोग गर्न नजान्दा, अपुरा ज्ञानहुँदा पनि थेप्रै कठिनाइ र कष्ट भोग्नु पर्दछ ।
३.ती ज्ञानका कतिपय कुराहरु सम्झन,चर्चागर्न सिकाउन,देखाउन हुन्छ । त्यसले कुनै कष्ट दिँदैन। त्यसैले कतिपय ज्ञानका कुराहरु जहाँपायो त्यहाँ, जहिलेपायो त्यहिले, जसलाईपनि भन्ने,जुनकुरा पनि भन्ने गर्न हुँदैन ।चर्चा गर्नु परे समय, बिधि, साबधानी, अड्कलेर चर्चा गनुपर्दछ ।
४.यस किताबको ज्ञानबुझ्न सकेपछि मानिसले शरीरको रचनाका साथ साथै मानिसको लिँग शरीर हुन्छ र अन्य त्यस्ता थुप्रै लिँग शरीरहरु सृष्टिमा र वरपर हुँदा रहेछन् । हामीले तिनीहरुको चर्चा गर्दा उनीहरुलाई बिउझाएको, बोलाएको भान पर्दछ र उनीहरु सँग सम्पर्क बन्न गएको हुन्छ । त्यस्तोसँपर्कको कारण बिभिन्न कष्ट, कठिनाइ, कहिले बिभिन्न रोग, लक्षण, दुर्घटना, अकाल मृत्यु हरु पनि सम्भावनाहरु हुन सक्दछन् ।
५.पितृ भन्ने हुँदा रहेछन् । ती सब भन्दा नजिकहुँदा रहेछन् । हामीले उनहिरु प्रति व्यक्तगरेको मायाले उनीहरु नजिकआएका हुँदा रहेछन् । पटकपटकको याद रचर्चाले पटकपटकआएका हुँदा रहेछन् उनीहरुले कष्टअनुभव गरेका हुँदा रहेछन् र त्यही उनीहरुकोकष्टकोअनुभूतिहाममिा पनिआएको हुन सक्दो रहेछ रमानिसको स्थुलशरीरले पनि बिभिन्न कष्टहरुमहसुस गरेकोहुनसक्दोरहेछ । उनिहरु ऋाउदैमा उनहिरेरुले कष्ट अनुभव गरेका हुनछन् त भन्ने प्रश्नहुन सक्दछ । मानिस चेतनशिल जीवहो । मानिसमानिसको व्यवहारलेमानिसले सुखवा दुःकखको अनुभव जीवनमा गरिरहेको हुन्छ । जब पितृ पूर्ण होसनखुलेको अबस्थामा आफ्नो घरमा, स्वास्निकहाँ,लोग्नेकहाँ, छोराछारीकहाँ आउँदा र छोरा छोरीलेआफ्लुलाई वास्तानगर्दा, खाना सत्नको भाग नलाउदा कति दुःख लाग्छ त्यहि भ्रमकोदुःख अनुभव गरिरहेको हुन्छ जब सम्म होस खुलेकोहुँदैन । त्यसैलेपितृको उद्धार पितृ सम्झेररुवावासी गर्दै बर्षौँ विताएर भलाईहुँदैनकि पितृका होसखुल्नेज्ञानका कुराहरु आफ्mन्तहरुले अध्ययनर अभयास,अनुभवहरुगर्न सकेको हुनु पर्दछ । पितृका नामराखेर बनाईएका बिभिन्न पाटीपौवा,चौतारा, धारा, पुरस्कार, मुर्ति, चर्चा, जयजयकार यी सबैपितृलाई बिउझाउने यन्त्र भएर बसेको हुँदोरहेछ । त्यसैले पितृलाई भुल्न पनि भएन र सँधै याद गर्न पनि भएन । सही तर्क बुझेर आवश्यक अनुसारको सम्झना , कर्महरु गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
६.ज्ञानका कतिपयनामहरु ,ज्ञानहरु चर्चा गरिरहनु पर्ने,भुल्न नहुनेहुन्छन् । यी नामहरु मानिसका लागि जीवनभर डोहोर्याउने साथी,गुरु,भगवान, रोजगार, खाना,पानी, सबै भएर बसेको हुँदो रहेछ ।
यी चित्रअनुसारमानिसको यात्रा हुँदो रहेछ ।
त्यसैले भवसागरको कुराहरु बुझ्न अति जरुरी छ । तर अध्ययनको समयमा पटकपटक चर्चार अनुभवहरुको आवश्यक भएको रपछिका समयमा त्यसलाइ पटकपटक कोट्याइ रहनुहुँदैन।
ड्ड पितृहरु कोही सतहभन्दा तल हुन्छन् रकोही माथि हुन्छन् । माथिकाहरुसँगको सम्पर्कहुँदा कष्टहरु अनुभवहुँदैन रबिभिन्न सहयोग र सल्लाहहरु दिएका हुन्छन् । तल तिर रहेका पितृहरुको सम्पर्कमा आउँदा कष्टको अनुभव हुन्छ ।उनीहरुको सम्झना चर्चा गर्दा बिउझने भएकोले आवश्यक बखतमा मात्र नामवा याद वा चर्चा गर्ने गर्ने पर्दछ । यसको मतलव घरमा भएको सबै चिजहरु फ्याक्ने भनेको होइन ।फेटो राख्न हुँदैन भनेको हैन। तर यी बस्तुहर यादगार चिन्हहरुहुन, यिनले तीपितृहरुको याद गराउछ भन्ने उद्देश्यले राख्न हुँदैन । त्यसो गर्दा झन गहिरिएर सम्बनध बाँ जान्छ । अब ती फ्mोटोहरु वा अन्य सामानहरु कसैको याददिलाउने चीज नभएर साधारण अन्य चित्रहरु वा सामानहरु जत्तिकै को महत्व रादछ, भन्ने गर्नु पर्दछ । तीसामान र चिधहरु अन्य सामान जत्किै उपयो गर्नमिल्ने भए उपयोग गर्ने साधनहुने भनेर चित्र कोठा सजाउने साधनहो भनेरएक साधारण महत्व दिएर राख्नु पर्दछ । जसरी जग्गा, घर, सुन,गहना पहिला कसेको थियो भालिअरुकसेको हुन सक्दछ। यी सबै भौतिक बस्तुहरुहुने यिनीहरुको उपयोग भौतिकबस्तुकोनै गुणअनुसार गरिएको हुनु पर्दछ ।आमा, बुबाm लोग्नेवा स्वास्नीको चिनो भन्न तिर लाग्ने हुँदैन । धर्म सिकाउने बितिसक्नु भएका गुरुहरुपनि पितृ सरह हुन्छन् । त्यसैले उहाँहरुको नामलिएर हरेक दिन जपगर्नेहरुहरेक दिन भवसागर पुगेर गएको आश्एको थाहा नपाउने हरु हुन् । हरेकदिन भवसागरको कुरा कोट्याउदा के खतराहुनछ भनेर गुरुदेखि चेलासम्मलाईथाहा नभएका समानविचारभएका समुहका सदस्यहरु ह्ुन् । यिनले आफ्mुले पनि दुःखकष्टभागिरहेका हुन्छन्। अशरुलाईपनि दुःखकष्ट पुर्याइृरहेका हुन्छन् । यस्तै गर्नअरुलाईपनि प्रेरणा दिनपाएहुन्थ्यो भन्दै ग्राहकखाज्दैहिँडेका हुनछन् । यसिबै अरुलाई दुःख फ्mैलाउने, सरुवारोगका रोगी जस्ता हुन् । केही दिनको यी सँगको सँगतमा मानिस त्यस गलतविचार र सँस्कार मा पसदछ र आफ्mु र आफ्mन्तहरुको लागि कष्टको मुहान बनेका हुन्छन् ।
ड्ड ३३ कोटि देवी देवताहरुको याद गर्न हुनछ,पुजाआजा, आरधना गर्न हुनछ ।तर ती ३३काटि देवताहरुमा थुप्रैका ब्रह्मको ज्ञानहुँदैन र भोग चलन, मानिुसँगकाो लेनदेनमानैबढी खुसी हुन खोज्ने हरुहुनछन् । त्यसैले छुट्याएरब्रह्मको ज्ञाननभएकाहरुलाई चर्चा नगर्नेगर्नुपर्दछ ।
ड्ड ब्रह्मज्ञानीदेवताहरुलाईनिर्गुणरुप सम्झेरसँधैसाथमा रहेको अनुभव गर्नसक्नु पर्दछ ।ब्रह्मका ज्ञानभउका अन्यश्रृषि,मुनी,ज्ञानीहरुलाईसम्झन हुनछ ।उहाहरुले दिनुभएको ज्ञान,दर्शनका कुराहरुको सँधैसम्झना भइ रहोस आवश्यक परेको वेलामा यादआओसभनेर समझने गर्नु पर्दछ । कतिपयशास्त्रका महत्वपूर्ण पँक्तिहरुलाइ घोकेको हुनु पर्दछ । किनकि मृत्यु पछि मानिसले लिएर जाने सम्पत्ति तिनैदिमागमा भर्न सकिएका, यादहरर घोक्नसकिउका पँक्तिहरुहो ।कुनै पँक्ति घोक्न सकिएनभने पछि आएर कापीपल्टाएर हेर्ने मोका हुँदैन । त्यसैले ब्रह्मका ज्ञानका बारेमा भएकका चर्चाका पँक्तिहरुलाई घोक्नसकेको हुनु पर्दछ । अरलाई सुनाउन सकेको हुनु पर्दछ । अूलाइ ब्रह्मको ज्ञानदिलाउन सक्ने वा त्यस बाटोमा लैजाने कार्यको ठुलो मुल्य मानिन्छ । ब्रह्मज्ञानीदेवताहरुसँसारका सबै धर्म,सँस्कार जातीहरुका, यो कुरा बुझेका नबुझेकाहरु सबैका हुन् भन्न जानेको हुनु पर्दछ ।
ड्ड ब्रह्मको ज्ञानर अनुभूतिलाईसँधै याद राखेको हुनु पर्दछ ।त्यसको लागि ती अभ्याुस हरु थारैमात्रामा भनेर पनि सँधै गरिरहने गर्नु पदृछ ।
ड्ड मानिस घरपरिवार,समाजमा फ्mर्कनु पर्दछ । जीवन सुखी,खुसीका साथ अरुलाइपनि बाडन सक्ने भएर बाँचेको हुनु पर्दछ।
इदि कसैमा यस पुस्तककोज्ञान,मनन, अनुभवका समयमा आएका डर त्रासहरु यो पुस्तको अध्ययनपछि सिद्धिन्छया कम हुन्छ । यदि कसैमा अझपनि डर त्रास नराम्रा सपनाहरु आद्यि आइरह्▒े भने उसकोअभयासपुगेको छैन । हतासहुनु पर्दैन । आफ्mन्तहरुलाइ यसबारेमा सुचनादिई एकान्त अबसथा नआओस, सबैका सहयोगहोसभन्ने बातापरण बनाउनेु पर्दछ । यो आखिर पारिवारिक सम्पत्तिहो । यो ज्ञान परिवारका कुनैसदस्यले पूर्णरुपमा महसुस गर्नसक्यो भने उसले आफ्ना पितृ, धेरैलामो नाताका, मामालि ससुरालिका,गाउँका पितृहरुलाउर्य तार्नहोस खुलाउन मद्दद्दत गर्नेछ । यसरी त्यस व्यक्तिलाइ डर त्रासले नछोड्नुकोकारण उसलाइ पितृहरुको याद आइरहनेगरेको वा अन्य कष्टका क्षणहरु याद आइरहने वा कुनै झगडा वा मननपरेको मानिसको याद आइरहने गरेको हुनु पर्दछ । यो सबभवसागरको सम्पर्कको लक्षणहो ।त्यसलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ ।अझकठिनाइ रहिरह▒े भने ३३काटि देवीदेवताका पुजाआजा चर्चाहरुछोडेर केवल ब्रह्मदेवीदेवताहरु निर्गुण रुपको हुन् आफ्mुपनि त्यही निर्गुणरुपको भागहो भनेर मात्र याद र चर्चा गर्नु पर्दछ ।ब्रह्मकोज्ञान रअनुभूतिको याद गरिराखेपछि ती भवसागरकाहरुको दृष्टिबाट पर पुगिन्छ ।यसैको अभ्यास गर्नु पर्दछ ।
ड्ड सबभन्दामहत्वपूर्णकुरा ब्रह्मदेवीदेवतार ब्रह्मलाई याद गरभनेर मागि अर्तिदिइयो।यिनैकुरा बिभिन्न शास्त्रकथा पुराणहरुमा पनि भनेको पाइन्छ । यिनैकुराहरुको गलत अर्थतर्क लगाउदा मानिसले धर्मसँस्कार मानेपनि नमानेपनि दुःख भइराख्ने भएको हो । देवीदेवतालाइ सँधै याद गरिराख भनेको एउटाआँखाले शिवजी,कृष्णलाईदेखिरहने अर्को आँखाले कामगर्ने, किताब पढ्ने,खानापकाउने गाडिचलाउने भनेको होइन् । भ्गवानका रुप,गुण रसृष्टिको गुणलाई सँधै सम्झेरआफ्नादैनिक कार्य गरभन्नु भएको हो । डाँडापनिखोलानालाबिैआफ्नो बनाउनपाएहुन्थ्यो, हुदाँ हुद्या चन्द्रमा सुर्यपनि आफ्नैमात्र बनाउन पाए हुन्थ्योभनेरनसोच भनेको हो ।आफ्mलाइ जस्तैअरुलाइपनि भोक,प्यास, थकाइ, दुखाइ, रोग लाग्न सक्दछ । तयसैले अरुलाई दुःख पर्दा अहास्ने मोका परे दुखुको ठाउँकहाानिरहो भनेर सोधेर मोका मिलाएरत्यही दुखेको ठाउँमा हाँनेकाम नगर भन्नु भएको हो। हातमा सुनका चुरालगाए प िछ पसगि हाल्यो नि अनि अरुका अगा८ि गइ सुनका चुरा देखाउने उद्द्श्यलेहात मच्चाइमच्चाइ घरी कपाइ मिलाएजस्तो या केके गदै सुनका चुराका चर्चासम्मआपुग्नु पदैृ। ती सुनका चुराले मासनिस राम्रो रनराम्रो भन्ने हुँदैन योकुरा नभुल भनेको हो । भान्छामा खानापकाउने बेलामा चुलोमा पकाउदैगरेको चलाउदैगरेको तरकारीमा पनि शिवजी वा कृष्ण खाज्न थाल्यो भने त्याहाँ शिवकृष्णत आउदैनन्हातचाहीँ पक्कै पोल्ने छ। गडिचलाउने बेलामा एउटाआँखाले भगवान खाज्ने अर्कोआँखाले बाटो हेर्छु भन्यो भने त्यसलै गाडिपक्कै कतै लगेर ठोक्छ । देवीदेवताहेर्ने नेत्र तेश्रो नेत्र ज्ञानको नेत्रले हो । ती तेश्रो नेत्रको अभ्यास वा अन्य आरधनाहरु विहान सबेरै सिद्धाएर थन्काएर अब दुइटा आँखाको होसमा फ्mर्केर भौतिक सँसारको नियम पालना गरेर दिनभर आफ्नो व्यवहार अनुसारमा बाँच्नु पर्दछ । चोरलाइ देवताका रुप वा अँग भनेर पुज्ने होइन कि त्यसलाई कानुन अनुसार दण्ड फ्mाँसि दीन सक्ने निठुर, कठोर भएर देखाउन सक्नु पर्दछ ।
महाभारत पुराणमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई त्यसरी नै निष्ठुर र कठोर बन्न सिकाउनु भएको थियो । भगवानकृष्णले अर्जुनलाई लडाइको मैदानमा लडाइ सुरुहुनु भन्दा अगाडि भएका बार्तालावमा सृष्टिको वर्णन र आफ्नो विराट स्वरुप देखाइदिनु भयो । त्यसो गरेपछि झन अर्जुन लडाइ गर्न इन्कार गर्दै थिए । भगवानकृष्णले अर्जुनलाई “फ्mलको आशा नराख कर्तव्य गर अर्जुन” भन्दै लडाइगर्न र आफ्नो नातेदारहरु, प्यारागुरुहरु र प्यारो बाजे भिष्मपितामहका विरुद्ध लड्न उक्स्याई रहनु भएको थियो । यसरीे उक्स्याउनु भएको भनेर भगवान कृष्णलाई कसैकसैले उग्रबादी, लडाइको पक्षमा लाग्ने भनेर गालि गर्ने गरेका छन् । तर उहाँले नजानेर झुक्किएर, भावनामा आएर त्यस्तो उक्स्याउनु भएको होइन कि सबै मानिसलाई सचेत गराउनु भएको शिक्षा दिनु भएको हो । अन्याय गर्न अगाडि सर्नेहरु सँग कसैले नाताहुनु हुँदैन, कुनै बचनबद्धता, कर्तव्य हुनु हुँदैन । मानिसले अन्यायको समर्थन गर्ने बित्तिकै उसका सबै त्यस अगाडि गरेका राम्रा कामहरुको समाजिक मानमयार्दा खतम हुन्छ । मानिसले अन्याय र अन्यायीको साथ दिनेहरुको साथ र सँगत गर्न हुँदैन भनेको हो । यदि मानिसले बीचबाटमा आएर अन्यायको बाटो लिन्छन् भने त्यस मानिस सँग गरिएका सबै सम्झौता, प्रतिबद्धताहरुको अन्त्य हुन्छ र त्यस मानिसको साथदिन छोड्नु पर्दछ । चाहे कुनै राजनैतिक पार्टी सँगठन होस्, कुनै समाजिक सँगठन् होस्, चाहे कुनै नेता, मान्यजन हुन्, चाहे गुरुहुन्, चाहे नाताले जितेका व्यक्ति हुन्, साथी होस्, लोग्ने होस्, स्वास्नी होस्, छोराछोरीहरु हुन् जो सुकै भए पनि अन्यायको बाटो लिए पछि त्यसको साथ नदिनु भनेर भन्नु भएको हो । भगवान कृष्णका पालामा बाजे भिष्मपितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्यहरुले न्यायको बाटो छा्डेर खाएको नुनको सोझो गर्छु भन्नु भयो र दुर्योधनको पक्षमा लड्न तयार हुनु भयो । त्यति खेर त्यस्तै नुनको सोझो जसरी पनि गर्नुपछ भन्ने खालका सँस्कार थियो होला र भगवान कृष्णले अब त्यसो गर्नु पर्दैन भन्नुभएको हो । अन्यायीहरु कसैले पनि माफ्m पाउँदैन तिनकै प्यारानाती र चेलाले मार्छन् भनेर देखाउनु भएको हो सबैलाई । नाती वा चेला पनि त्यति नै कठोर बन्नु पर्छ यदि सत्यको पक्षमा लड्ने विचार छ भने भन्नु भएको हो ।
त्यति खेर भिष्मपितामह, महानगुरु द्रोणाचार्यहरुले न्यायको भन्दा नुनको मुल्य बढी नदेखेर खुरुक्क न्यायका पक्षमा आएर कृष्णका पछाडि रहेर लड्नु भएको भए ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला सायद । आजका दिनमा पनि उहाँहरु यतैकतै हिमाल तिर तपस्या गरेर बस्ने गर्नु हुन्थ्यो होला । हामीपनि कहिले कहिले शैक्षिक भ्रमणमा गए जस्तो गरेर हेर्न गइन्थ्यो होला । केही ज्ञानका कुराहरु सिक्ने मौका पाइन्थ्यो होला । नेताहरुलाई त झन बिभिन्न सस्त्र, अस्त्र, राज्य गर्ने बिभिन्न उपाय तरिकाहरु सिकाइ दिनु हुन्थ्यो होला । त्यसरी राजनितीका तरिका सिक्न पाए हाम्रा नेताहरु किन बिदेशतिर जो पाए पनि लुरुक्क परेर शरण पर्न किन जानु पथ्र्याे होला र ? इच्छा मरण भएका, चक्रव्युह रच्न जान्ने, बिभिन्न सस्त्र अस्त्र चलाउन जान्नेहरुले नुनको भाउमा ज्यान गुमाए अब आज आएर गुलेली राम्रो सँग चलाउन नजान्लान जस्ताहरुले देश चलाउन परिरहेछ अनि गाह्रो हुदैन त ? यता गरे पनि चिप्लने उता गरे पनि चिप्लने, केही झुटो बोले केही दिनमा सबैले थाहा पाइहाल्ने भएर कस्तो असजिलो भइरहेछ नेताहरुलाई । अर्जुनलाई बाणले नदी थुन्न सिकाउने गुरुले सस्तोमा ज्यान गुमाए । आज बिजुली बत्तिको जमानामा नदी नाला बाणले थुन्न सक्ने मान्छे कति चाहिएको छ नेपालमा । त्यसरी बाँणले कर्णाली, कोशी थुनेर बत्ति बाल्न पाए कति सुबिधा हुन्थ्यो होला जनतालाई । त्यति नदी थुनेर बिजुली बालौ भनेर छिमेकि देश भारतलाई गुहार मागे आफ्mुलाई धेरै भाग चाहिने नेपाललाई केही पनि नबच्ने हुन्छ रे भनेर भारतसँग कुरा मिलेको छैन । अरु विदेशी लगानिकर्तालाई बोलाएर बिजुली निकालि दिनुस भनेर गुहार मागे नेपाली घूस्याहाहरुले कमिसन धेरै मागेर लगानीकर्तालाई नै केही बाँकी नरहने भो भनेर उनीहरु मान्दैनन् रे भनेर कुरा मिलेको छैन भन्छन् । यहाँ जनता लोड सेडिङ्गको मारमा छन् । बरु बिजुलीनै नभएका ठाउँमा मानिसलाई ढुक्क होला । बिजुली पनि छैन लोड सेडिङ्ग पनि छैन । यहाँ शहरको बिजोग भन्दा त त्यहाँ गाउँमा बिजुली नभएको ठाउँमा पो ठिक छ कि ? यहाँ शहरमा त बिजुली आउँन पाएकै छैन जान्छ । बिजली आयो भनेर भात पकाउन राइसकुुकर जोडे भात नपाक्दै बिजुली जान्छ, गर्मी भयो पँखा चलाउनु पर्यो भनेर पँखा चलाएर यसो सजिलो गरेर बस्न पाएको छैन त्यही बेला बिजुली जान्छ, टिभि हेर्न भनेर यसो दुइचार चानेल घुमाएर कुनैै चानल मन पराएर अब यही चानल हेर्नु पर्यो भनेर यसो बसेको सिट मिलाउन पाएको छैन त्यही बेला बिजुली जान्छ । म त अलि धेरै बर्ष लोड सेडिङ्ग भन्ने कुरा जनतालाई थाहा नभएको ठाउँमा बसेर आएको, केही दिन त बाँनी पार्न कठिन भयो । आफ्ना बिभिन्न समस्याले भूत, पे्रत, पितृहरुसँग सम्पर्क गर्नु पर्दा पनि त्यति कठिन भएन बरु । तर यहाँ त सुरुसुरुमा त बिजुलीको तमासाले दिमागै फ्mुस्काउछ कि जस्तो भयो । तर पनि नेपालीले सहन सक्छ सबै पचाउँन सक्छ रहेछ । अब त जे सुकै होस बिजुली आउँन मन लागे आउँछ जान मन लागे जान्छ । अरु जनतालाई पनि केही फ्mरक परेको छैन मलाइ पनि मतलव हुन छोड्योे । ढुक्क छ ।
धेरै गहिरो कुराहरुले दुखेको टाउको अलि हलुङ्गो हुन्छ कि भनेर यी माथिका केही व्यङ्गात्मक विचार व्यक्त गरेको हुँ ।